Ilay vehivavy nanazava ny masoandro sy ny kintana
Science Astronomers manan-danja
Meet Cecelia Payne
Androany, mangataha astronoma inona ny masoandro sy ny kintana hafa dia vita, ary ho lazaina ianao, "Hydrogen sy helium ary andian-tsoratra amin'ny singa hafa". Fantatsika izany amin'ny alalan'ny fandalinana ny masoandro, mampiasa teknika antsoina hoe "spectroscopy". Amin'ny ankapobeny dia manilika ny hazavan'ny masoandro eo amin'ny andaniny ny andrefan'ny ampahany antsoina hoe spectrum. Ireo toetra manokana ao anatin'io spectrum io dia milaza ny astronoma hoe inona avy ny singa ao amin'ny rivotra Sun.
Hitantsika ny hydrogène, ny helium, ny silisy, ny karbôna, ary ireo metaly mahazatra hafa amin'ny kintana sy ny zavamaniry manerana izao rehetra izao. Manana izany fahalalana izany izahay noho ny asan'ny mpisava lalana nataon'ny Dr. Cecelia Payne-Gaposchkin nandritra ny asany.
Tamin'ny taona 1925, ny mpianatra astronomy Cecelia Payne dia nitodika tamin'ny diplaomasiny momba ny lohahevitry ny atmosfera. Ny iray amin'ireo zava-dehibe hitany dia ny hoe ny Sun dia manankarena amin'ny rano sy ny heliôma, mihoatra noho izay heverin'ny astronoma. Raha jerena amin'izany, dia nanatsoaka hevitra izy fa ny hydrogène no singa lehibe indrindra amin'ny kintana rehetra, mahatonga ny hydrogène ho singa manan-danja indrindra eto amin'izao tontolo izao.
Misy dikany izany, satria ny Sun sy ny kintana hafa dia mamelona ny rano ao anaty voany mba hamoronana singa mavesatra kokoa. Rehefa mihalehibe izy ireo, dia mamelona ireo singa mavesatra kokoa ireo kintana mba hahatonga azy ireo ho sarotra kokoa. Io dingan'ny nokleosynthesis stellar io dia ny fonenan'izao tontolo izao miaraka amin'ny ankamaroan'ny singa faran'izay sarotra noho ny hydrogène sy helium.
Anisan'ny lafiny lehibe amin'ny fivoaran'ny kintana koa izy io, izay tadiavin'i Cecelia hahalala.
Ny hevitry ny kintana dia mahatonga ny rano amin'ny ankapobeny ho toy ny zavatra mahavariana ho an'ny astronoma amin'izao fotoana izao, saingy tamin'ny fotoana nananany, dia nahagaga ny hevitra Dr. Payne. Ny iray amin'ireo mpanolotsainy - Henry Norris Russell - dia tsy nanaiky izany ary nangataka ny hanaisotra azy amin'ny fiarovan-tenany.
Taty aoriana, nanapa-kevitra izy fa hevitra tsara izany, namoaka azy irery, ary nahazo ny fahazoan-dàlana hahitana izany. Nanohy niasa tao Harvard izy, saingy nandritra ny fotoana, satria vehivavy izy, dia nahazo karama ambany izy ary ny kilasy nampianariny dia tsy neken'ny katalaogy tamin'izany fotoana izany.
Nandritra ny am-polontaona vao haingana dia naverina tamin'ny Dr. Payne-Gaposchkin ny vola azony sy ny asa aman-draharaha nataony. Ankoatra izany, dia nomena azy koa ny fametrahana ireo kintana ireo ho azo tarafina amin'ny mari-pahaizan'izy ireo, ary namoaka lahatsoratra maherin'ny 150 momba ny atmosfera, sary mitsangana. Niara-niasa tamin'ny vadiny koa izy, Serge I. Gaposchkin, tamin'ny kintana miovaova. Namoaka boky dimy izy ary nahazo mari-pankasitrahana maromaro. Nandany ny asa fikarohana nataony tao amin'ny Harvard College Observatory izy, ary farany dia izy no vehivavy voalohany nitarika ny sampana tany Harvard. Na dia teo aza ny fahombiazana azon'ireo astronoma lahy nandritra ny fotoana fiderana sy fanomezam-boninahitra mahatalanjona, dia niatrika fanavakavahana izy nandritra ny androm-piainany. Na dia izany aza, ankehitriny izy dia ankalazaina ho mpandinika tsara sy fanta-daza amin'ny fandraisany anjara izay nanova ny fahatakarantsika ny asan'ny kintana.
Iray tamin'ireo voalohany tamin'ireo vondrona astronoma vehivavy tao Harvard i Cecelia Payne-Gaposchkin nanozongozona ny lalana ho an'ny vehivavy ao amin'ny astronomia fa maro no milaza azy ho fitaomam-panahy mba hianatra ireo kintana.
Tamin'ny taona 2000, fankalazana ny faha-100 taonany ny fiainany sy ny siansa tao Harvard no nanintona ireo astronoma eran-tany mba hiresaka momba ny fiainany sy ny zavatra hitany ary ny fomba nanovan'izy ireo ny endrika astronomia. Noho ny asany sy ny ohatra nasehony, ary koa ny ohatr'ireo vehivavy izay nentanin'ny herim-pony sy ny sainy, dia mihatsara tsikelikely ny andraikitry ny vehivavy ao amin'ny astronomia, satria mifantina kokoa amin'ny asany.
Sarin'ny mpahay siansa nandritra ny fiainany
Dr. Payne-Gaposchkin dia teraka tamin'ny Cecelia Helena Payne tany Angletera tamin'ny 10 May 1900. Nanjary liana amin'ny astronomia izy rehefa naheno ny Sir Arthur Eddington izay nanoritsoritra ny zava-niainany nandritra ny fitsidihana tako-masoandro tamin'ny 1919. Nianatra momba ny astronomie izy avy eo, saingy noho izy vehivavy, Tsy nomena mari-pahaizana avy any Cambridge izy. Niala tany Angletera ho an'i Etazonia izy, ary nianatra momba ny astronomia izy ary nahazo ny PhD avy amin'ny Radcliffe College (izay anisan'ny Harvard University ankehitriny).
Taorian'ny nahazoany diplaomaty azy, dia nanohy ny fianarany karazana kintana maromaro i Dr. Payne, indrindra fa ny kintana tena tsara indrindra "kintana avo". Ny tena mahaliana azy dia ny hahatakatra ny rafitry ny milisy Milky Way, ary farany izy dia nandalina kintana tsy miova amin'ny vahindanintsika sy ny manodidina ny Magellanic Clouds . Ny anjara asany dia nandray anjara lehibe tamin'ny famaritana ny fomba nahaterahan'ny kintana, velona ary maty.
Cecelia Payne dia nanambady mpiara-dia tamin'i Serge Gaposchkin tamin'ny taona 1934 ary niara-niasa tamin'ny kintana variana sy tanjona hafa nandritra ny androm-piainany. Nanan-janaka telo izy ireo. Nanohy nampianatra tany Harvard i Dr. Payne-Gaposchkin hatramin'ny taona 1966, ary nanohy ny fikarohana nataony ho an'ny kintana miaraka amin'ny Astrophysical Observatory Smithsonian (foibe foibe ao amin'ny Ivontoerana Astrophysics Harvard. Maty tamin'ny 1979 izy.
Dr. Beth A. Brown: Astrophysicist NASA
Hihaona amin'i William Herschel: Astronomer sy mpihira
Profile of Radio Astronomer Jocelyn Bell Burnell
Ny fiainan'ny Pythagoras
Biographie of Subrahmanyan Chandrasekhar
Giordano Bruno: maritiora ho an'ny Siansa
Ny fiainana sy ny vanim-potoanan'ny Dr. Vera Cooper Rubin: Mpisava lalana astronoma
Thales of Miletus: Grika Geometer
Ny Anthems Nationale, Aostralia, ary Soisa
Fampidirana Molecular Geometry
Think-Tac-Toe: tetikady iray ho an'ny fahasamihafana
Sarin'ny Serial Rapist David Parker Ray
Fankalazana an'i Mabon manerana izao tontolo izao
10 Mpihira Jazz Mozika Mpihira
Hianaro vitsivitsy ny 'Hundekommandos' (alika alika) amin'ny teny alemana
Univeristy an'ny Central Florida Photo Tour
Ny Midheaven nosoratan'ny Zodiac
Anne Hutchinson: Mpanohitra ara-pinoana
Ny vokatry ny fanavakavahana nandritra ny Ady Lehibe II
Mafana ve ny Vodka ao amin'ny Farihy?
Worksheets ho an'ny tanjon'ny Sekoly fianarana
Kevitra momba ny tontolon'ny siansa
The 5 Most Common North Maple Trees